Momba anay - Wuxi Kuanyang Textile Technology Co., Ltd.
Wuxi Kuanyang Textile Technology Co., Ltd. naorina tamin'ny 1995, manana traikefa mihoatra ny 25 taona amin'ny sehatry ny lamba. Miompana amin'ny famoronana lamba avo lenta ary koa amin'ny fanomezana serivisy tsara indrindra, dia namidinay ny vokatray tamin'ny firenena sy faritra maro toa an'i Amerika, Eropa, Aostralia ary Azia atsimo atsinanana.
Wuxi Kuanyang Textile Technology Co., Ltd. matihanina amin'ny fampandrosoana sy ny fampiharana lamba fanatanjahan-tena ivelany sy anaty trano. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, noho ny fanahiana iraisam-pirenena momba ny fandotoana plastika, ny orinasanay dia mifindra amin'ny lamba maharitra sy voaverina. Amin'izao fotoana izao, ny orinasanay dia nahazo mari-pahaizana GRS ary lasa mpamatsy lamba azo havaozina.